Rose of Sharon: မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဗိုလ်လုပွဲ
Posted by rose of sharon at 10:04 AM
စံပယ်ချို September 26, 2012 at 3:08 PM
ရွှေဆိုတာ မြန်မာအတွက်ပါ နောင်နှစ်မှာ ရွှေတဆိပ်ရဖို့ ရပါစေလို့.....လီလီ
rose of sharon September 26, 2012 at 5:12 PM
လီလီ ... ဟုတ်တယ်သူငယ်ချင်းရေ... ဆုတောင်းနေမယ်
ကိုအောင် September 26, 2012 at 5:47 PM
ပထမဆုံးပုံက လူတွေကုိနောက်လန်အောင်ရိုက်ထားလို့ဗိုက်တွေပူနေတာနော်...မAlison lee ရဲ့ဗိုက်က အပြင်မှာ အဲလိုပူပါဘူးဗျာ..ဟီးဟီး
rose of sharon September 26, 2012 at 6:44 PM
ကိုအောင်... ဗိုက်အပူပြိုင်နေကြတာဘယ်သူတွေပါလိမ့်နော်... :D
Nyi Linn Thit September 26, 2012 at 9:32 PM
အဲဒီလို သွားအားပေးနိုင်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် စိတ်ဓါတ်အသာနဲ့ ကစားသွားတာ သိရလို့လည်း အသင်းရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် အားတက်စရာပါ၊ ဘယ်ဖက်ရင်ဘတ်ပေါ် လက်သီးဆုပ်တင်ပြီး နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုနေတာ မိုက်တယ်...။း)
rose of sharon September 27, 2012 at 1:46 PM
mstint September 27, 2012 at 12:42 PM
ရှုံးပေမယ့် စိတ်ဓာတ်လေးကို လေးစားတယ် နော်ဖောရေ။
rose of sharon September 27, 2012 at 1:47 PM
မြတ်နိုးသူ(MUFL) September 27, 2012 at 4:04 PM
Many thanks for the news and the photos of Myanmar women football team. I have been looking up for their news. Also, you guys are wondeful that you all managed to go and support the team. Really fantastic. God bless you all.
Shinlay September 30, 2012 at 6:36 PM
san htun October 5, 2012 at 10:47 AM
ဂိုးအရ ရှုံးပေမယ့် စိတ်ဓာတ်အရတော့ ဗိုလ်စွဲပါတယ်..ဒီလိုသတင်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာ..